Isifundo se-Ukuziphatha neZimo
Imithetho leyo, uma ilandelwa kahle, ingakulethela ikusasa eliqhakazile nelinenjabulo.
Yiziphi izibalo nokuthi uzisebenzisa kanjani ukukala impilo yanoma imuphi umsebenzi nokubikezela okuzokwenzeka ngokuzayo.
Izinyathelo eziqondile ongazisebenzisa ukuze uthuthukise ngokushesha noma isiphi isimo somuntu siqu noma sochwepheshe ozithola ukuso.
Kudala umuntu ethola ukuthi izimiso zokuziphatha ziyindaba edidayo. Emashumini eminyaka amuva sekuye kwaba njalo. Umuntu wazi kanjani ukuthi akwenzayo kulungile noma akulungile? Lapho ebona amadoda angathembekile ephethe amandla, izigebengu zikhululeka futhi izindinganiso zendabuko ziphonswa eceleni, mhlawumbe ubona ukuthi kufanele athathe indlela elula yokuphuma. “Abanye bayakhohlisa ngentela yabo, kungani ngingafanele?” “Ezinye izingane zintshontsha ezitolo, yini ingozi?” Kepha, noma ngabe yini enye, umuntu kufanele aphile naye. Njengoba izingcindezi eziningi zidudula futhi zidonsela kumuntu, angaqiniseka kanjani ukuthi ukukhetha kwakhe kuzoba ngcono kakhulu kuye, emndenini wakhe nakuzo zonke izingxenye zempilo yakhe nekusasa lakhe?
U-L. Ron Hubbard uthole impumelelo enkulu emkhakheni wokuziphatha obekungabandakanyi nje kuphela ukwenziwa lula nokwenziwa kwe-codification yesihloko, kodwa nokwakhiwa kobuchwepheshe obusebenzayo obusebenza ezimpilweni zethu zansuku zonke, obuletha injabulo, ukuchuma kanye nokusinda.
Lezi zinto eziyisisekelo, ezithathwe emzimbeni womsebenzi kaMnu Hubbard, azivezi bonke ubuchwepheshe bokuziphatha obutholakala kwi-Scientology. Kodwa-ke, zinikeza izindlela eziqondile zokuthi umuntu akhuphule izinga lakhe lokuziphatha, akhulise amandla akhe okusinda kunoma iyiphi indawo yokuphila futhi asize abanye benze okufanayo. Ngakho-ke ubuchwepheshe bokuziphatha iyithuluzi eliyinhloko olidingayo ukuze uphumelele kuzo zonke izici ezingu- zobukhona.
Incwajana Ukuziphatha neZimo
Lapho sekuqediwe Isifundo se-Ukuziphatha neZimo, uzothola isitifiketi nge-email.
“Isayensi yokuziphatha kanye nobulungiswa kudala yaba yingqikithi yobuntu. Singabantu kuphela njengohlelo lwethu lwezobulungiswa, futhi njengoba siphathana. Esifundweni se-Scientology Volunteer Ministers i-Ethics and the Conditions, u-L. Ron Hubbard ukhiphe isethi ephelele yamathuluzi wokuphila impilo yethu.
“Ngokufundisa abantu ukuthi bazibone kanjani izimo eziqondile zokuphila, nokuthi bangawasebenzisa kanjani amafomula nezinyathelo kule mibandela, bangazithola sebethuthuke kakhulu, futhi nezinga lempilo ethuthukiswayo alihlali nje.
“Ngenxa yokulandela lezi zinyathelo, ngithole ukuthi ngimatasa kakhulu empilweni—nginezinto eziningi engizithuthukisile—ukuthi inkinga yami enkulu manje iqinisekisa ukuthi ngilinganisela kuzo zonke izingxenye zempilo yami.
“Angikaze ngiphile impilo engishiye njengomuntu ojabule kangaka. Ngiphinde ngaba nomzuzwana 'wokuqaphela' ukuthi kungani abantu abangenazo izimiso zokuziphatha bevame ukuhlala ezingeni eliphansi kakhulu lokuphila. Lokhu kunqoba uqobo kungikhombisa ukuthi kungani iningi labangane bami asebekhulile bezithole bebhajwe esimweni sokujikeleza okuphindaphindiwe.
"Amakhono alesi sifundo kufanele afundwe yiwo wonke umuntu, futhi izimpilo zabo zizoba yinto ehluke kakhulu."
“Ngibe nempumelelo enkulu ngokuthatha lezi zifundo Zamavolontiya Ministers. Ngokulandela imihlahlandlela sengibuyise izibalo zami zezezimali kwinkambo eziqondisa kahle. Ngaphambi kokuba ngiqede isifundo ngangisesikweletini sekhadi lesikweletu kuze kufike entanyeni yami, futhi kungakapheli nenyanga nje ngiqedile izifundo ngikuqedile okungaphezu kuka-90% alo!
"Bekufanele ngiphume enkambisweni emile, futhi ngiqinisekise ukuthi ngiyayilandela ifomula lesimo sokunotha kahle uma kungena imali."
Ngaphambi kwalesi sifundo, bengingazazi izimo zami kanye nezimo zabanye, emsebenzini. Ngibe nezinkinga eziningi emsebenzini wami owedlule ngenxa yokungabi nalolu lwazi. Kwesinye isikhathi senza izinto ezingafanele ngesikhathi esifanele futhi senze izinto ezilungile ngesikhathi esingalungile.
“Lezi zifundo zinginikeze indlela efanele engizosebenza ngayo—okufanele ngikwenze ngalesi sikhathi nokuthi yini okungafanele ngiyenze ngalesi sikhathi. Kunginike inqubo yokubona izinkinga bese ngizixazulula ngenqubo yesayensi. Lesifundo singenze ngabona amaphutha ami nawabanye emsebenzini. Ukube angizange ngiye kulesi sifundo, ngingasho ngokuphepha ukuthi bengingeke ngibe nokuqonda izimfihlo zale ngxenye yokuphila.
“Ekugcineni kumele ngengeze, kuyasebenza impela uma kusetshenziswe kahle. Manje senginokuqonda okuningi ngemvelo engisebenza kuyo futhi ngingasiza nabanye.
"Ngibonga umphathi wami wezifundo ngosizo lwakhe nangemiyalo efanele, naku-L. Ron Hubbard."